Omkhaya baseGermany koweSoweto Derby - Bayede News
Omkhaya baseGermany koweSoweto Derby
Zine izinto ezenza ukuthi umdlalo womkhaya baseSoweto phakathi kweKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates obekelwe uMgqibelo ozayo eFNB Stadium ligamenxe elesithathu ntambama, ulangazelelwe ngabovu. Ifomu Womabili la maqembu asefomini kulezi zinsuku asethubeni lokunqoba isicoco se-Absa Premiership okuzobe kucima usizi lweminyaka kungangeni zindebe emakhabetheni awo. IChiefs, esaqhwakele kulogi ngamaphuzu angama-45 ngemuva kwemidlalo eli-20, yagcina ukunqoba iligi ngesizini yezi-2014/15 iholwa uStuart Baxter. Kwakusekhona uRuud Krol iPirates, esivuke emaqandeni yahlala ngemuva kwezimbangi zayo zeminyaka, igcina injabulo ngesizini yezi-2011/12. Njengamanje ihlezi endaweni yesithathu ngamaphuzu ayi-39 emdlalweni eli-21. Ngaleyo ndlela abadlali bala maqembu abadinge kutshelwa ngokubaluleka kwalo mdlalo umphumela wawo ozoba nomthelela ekutheni isicoco seligi siya eNaturena noma e-Orlando ngoNhlaba mhla ziyisi-9.
Abadlali ababhekiwe IChiefs nePirates bazongena enkundleni behlome ngabadlali abangalibheki ipali nasebeshaye amagoli amathathu emdlalweni owodwa kule sizini. USamir “Kokota Piano” Nurkovic, olandwe eSerbia wafika wasijwayela ngokushesha isitayela seChiefs, usehlohle amagoli ali-11. Isiguqa saseMalawi, uGabadhino Mhango, ungathi sizelwe kabusha njengoba sesiphenduke umsindisi kweZimnyama nokufakazelwa ukuhamba phambili ngamagoli ali-14. Ukuqeda le sizini laba badlali behamba phambili ngamagoli bese behlabana ngeLesley Manyathela Golden Boot yinto okungabuzwa ukuthi bayishayela isiguqo kakhulu kulezi zinsuku.
Njengoba sekuphele iminyaka engama-24 kwagcina ngoJerry “Legs of Thunder” Sikhosana ukubonakala komgadli eshaya amagoli amathathu emdlaweni weSoweto Derby, kufuze ukuthi uNurkovic noMhango bazofuna ukuzifaka emlandweni ngokuvala leli gebe. USikhosana waphendula uBrian Baloyi upopayi ezintini zeChiefs evalela amagoli uMagebhula udlula ngehubo lamagoli amane kwelilodwa emdlalweni weBob Save Semi Final. Abaqeqeshi Kuzoqopheka umlando njengoba kuzobe kudlana imilala omkhaya baseGermany selokhu kwasungulwa i-PSL ngowe-1996. U-Ernst Middendorp nokho uzobe engaqali ukuba semdlalweni omkhulukazi e-Afrika njengoba esebuya ihlandla lesibili ekuqeqesheni iChiefs. UJosef Zinnbauer ulandwe ngoZibandlela ukuyohlenga umkhumbi wePirates obucwila iholwa nguRulani Mokoena ongomunye wabaqeqeshi abasebancane ngeminyaka yobudala kuleli.
Izingqapheli zamngcwaba ephila uZinnbauer kwazise wafika nerekhodi elinganiki ugqozi. Emaqenjini aseGermany naseSwitzerland asebenze kuwo akukho lutho oluyisimanga alwenzile. Kodwa useyivalile imilomo yabaningi njengoba esenqobele iPirates imidlalo eyisi-8 nokwenze yahlala ezithendeni zeChiefs phezulu kulogi. Njengoba engakaze anqobe lutho selokhu angena ekuqeqesheni ngowe-1996, akubuzwa ukuthi ukunqoba isicoco seligi nePirates into ebusa umqondo wakhe ngisho elele. Ukunqoba koqhakazisa iCV yakhe uma esefuna ukufesa kwezinye izindawo. Inhliziyo kaMiddendorp isenelukuluku lokunqobela iKhosi iligi yize phambilini wayisiza ekuphakamiseni iSAA Supa 8 ngowezi-2006 ne-Absa Cup ngowezi-2005.
Igoba eJalimane Okokugcina okuzoshubisa lo mdlalo wangesonto elizayo ukuthi unegqubu phakathi. IPirates isazikhotha amanxeba njengoba yangcwatshwa ngamathathu kwamabili emzuliswaneni wokuqala. Kuzocaca-ke ukuthi kulo mdlalo izogobaphi insimbi njengoba kwaziwa ukuthi engagobi igoba eJalimane.